Singapaoro: Dokotera amin’ny biolojia, bilaogera, sady mpamily fiarakaretsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2017 14:08 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Português, বাংলা, Español, polski, English
Mpamily fiarakaretsaka any Singapaoro izy [amin'ny teny anglisy toy ireo rohy rehetra voatanisa], bilaogera, ary manana maripahaizana avy ao amin'ny Oniversiten'i Stanford. Faritan'ireo mpampiasa aterineto ao Singapaoro ho ilay « mpamily fiarakaretsaka manampahaizana indrindra eran-tany izy ». Mingjie Cai no anarany.
Niasa nandritra ny 16 taona i Dr. Cai toy ny mpikaroka ambony tao amin'ny Ivontoeran'ny Biolojian'ny molekiola sy ny sela (IMCB)-n'ny ASTAR , ao Singapaoro. Voaroaka tsy nisy onitra izy tamin'ny 2007. Tamin'ny volana novambra 2008, taorian'ny fikarohana tsy nahitàna vokany, dia nanapaka hevitra ny ho lasa mpamily fiarakaretsaka izy. Efa efa-bolana izy izao no nanomboka nitoraka nilaogy. Nanintona ny sain'ireo mpitoraka bilaogy ao Singapaoro sy ireo media ho an'ny olon-drehetra ny bilaoginy.
Angamba ny hany mba mpamily manerana izao tontolo izao manana maripahaizana avy ao Stanford sy tena manana todika siantifika marina, voatery nandao ny fikarohana aho teo amin'ny farantampon'ny asa ara-tsiansa nataoko, ary tsy afaka nahazo asa hafa noho ny antony izay ataoko hoe « singapaoreanina manokana ». Noho izany, am-pamiliana fiarakaretsaka aho ho an'ny fivelomako ary mitantara ny zavatra iainako mba hahatonga ity asa tokampizotra ity ho lasa mahaliana kokoa. Manantena aho fa hahaliana anareo ihany koe ireny tantara ireny.
Mamaritra ny Dr. Cai ho toy ny « feon'ireo rehetra mpamily fiarakaretsaka rehetra ao Singapaoro» ny Rambling Librarian (Mpitamboky mirediredy ):
Gaga amin'ny fitondrantenan‘ilay bilaogera-mpamily fiarakaretsaka i Alvinology II :
Mankafy ny fomban'Andriamatoa Cai i “Mr Wang Says So” (Izanyu no ambaran'i M. Wang) :Tiako be ny fanoratany. Manao ny marina, mahay mihaino, marina ary tena maneho tsara ny tsiro ao an-toerana. Mahatonga ahy te-hanoratra boky poezia ny sorany.
Mieritreritra kosa i Heyzanie's World (Ny tontolon'i Heyzania) fa tsy asa manambany ny mamily fiarakaretsaka, na ho an'olona manana maripahaizana ‘doctorat’ avy any Stanford aza:
Antenain’i Kent Ridge Common ireo mpahay siansa fa ho afaka hiasa ao anaty tontolo iray ahafahan'ireo samy mahay indrindra mivelatra :